Somaliland: Mid Kamid Ah Dableydii Dishay Taliye Casayr Oo Dhaawaciisa La Keenay Cusbitaalka Magaalada Hargeysa - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Mid Kamid Ah Dableydii Dishay Taliye Casayr Oo Dhaawaciisa La Keenay...
Ciidamada booliska somaliland ayaa soo qabqabtay 8 nin oo kamida dableydii dilka u gaysatay taliye Casayr.
Waxaana la sheegay in ciidanka booliska iyo dableydaas hubaysan ee dilay taliyaha ay rasaas is waydaarsadeen, iyada oo ay cidanka qaranku ugu danbeyntii soo qabteen 8 nin oo kamida dableydaasi, sidoo kalena waxay ciidanku ay dhaawaceen mid kamida dableydaa.
Maxamed Cabdi Jamac ( Madax-Yar) waa mid kamida dableydii dilka u gaystay taliye casayr isla markaan ay ciidanku dhaawac kusoo qabteen, waxaana sida warar xog ogaal ah oo ay helayso shabakada Wargane
ay sheegayaan in dhaawaciisa hada lagu dabiibayo cusbitaalka wayn ee magaalada hargeysa.
Sido kalena waxay wararku intaa ku darayaan in kuwii kale loo taxaabay xabsiga wayn ee magaalada hargeysa. Halka ay wali ciidamada boolisku ku daba jiraan soo qabashada saddex kale oo kamida dableydaas oo iyagu baxsaday.
Waxii warar ah ee soo kordha kala soco shabakada wararka Wargane